သက်ဝေ: ငြိမ်းချမ်းရေးငှက်ကို မွေးဖွားပေးသော စက်တင်ဘာလအကြောင်း
Hmoo September 27, 2010 at 11:02 PM
TURN-ON-IDEAS September 27, 2010 at 11:09 PM
မလွတ်မြောက်နိုင်သေးတဲ့ ဘဝတူ မြန်မာလူမျိုးတွေ... ဒီလိုမျိုး တွေးနေကြပြီလား...
ကိုယ်လွတ်မရုန်းနိုင်ပဲ ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ အမေစု... စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရှိပါစေ။
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါ အစ်မ...
Anonymous September 27, 2010 at 11:26 PM
Why they are waiting for?
by Wai Hnin Pwint Thon..
Ohh....you went back in the middle of Myanmar Literary Talks to writeapost?
ရွှေရတုမှတ်တမ်း September 28, 2010 at 2:26 AM
အဲဒီ ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရင် ပြောပါအုန်း..
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ September 28, 2010 at 5:19 AM
ကဲကဲ.. . ဒီမိုတွေ။ စောက်တင်းပြော စောက်ပြစ်တင်တဲ့ လမ်းစဉ်မဟုတ်ပဲ အမြင်ဆန်း.. အသွင်ဆန်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ပေါက် မိုးသီး လုပ်ရပ်က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ နအဖဖြုတ်ချရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းလေးတွေ မေးထားတယ်။ စဉ်းစားပြီးဖြေပေးလိုက်ပါ။ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူးဆိုပြီး ထိုင်မနေနဲ့။ တိုင်းပြည်အရေးကို ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်မနေနဲ့။ မိမိဥာဏ်မှီသလောက် ဖိနပ်ပေါက်မိုးသီး မေးထားတာလေးတွေကို ဖြေပေးလိုက်ပါ။ အကြံကောင်းလေးတွေ စုပေါင်းမိရင် တစ်ခုခုတော့ အကျိုးရှိတတ်ပါတယ်။
Moe Cho Thinn September 28, 2010 at 7:27 AM
အဲဒီ ဘုန်းတော်ကြီး ရွတ်ဖတ်နေတာက "တို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ" လို့ ဖြစ်မှာပါပဲ။
ဖြူ September 28, 2010 at 8:52 AM
တွေးချင်သလောက် ဆက်ကာ ဆက်ကာ တွေးသွားနိုင်တဲ့... ရသ...
ပုံရိပ် / Pon Yate September 28, 2010 at 11:18 AM
ချိုးငှက်လေးနဲ့ အတူ ခံစားသွားပါတယ် အစ်မရေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 28, 2010 at 3:26 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးငှက်ကလေးတွေ လွတ်လပ်စွာ ၀ဲပျံနိုင်ပါစေ။
ညီမလေး September 28, 2010 at 8:50 PM
ငိုကြွေးသံများ တကယ်ကိုပဲ ရပ်တန့်ပါစေချင်ပါပြီ မရယ် ..
sonata-cantata September 28, 2010 at 9:45 PM
သူ့နံမည်တောင် မေ့လျော့နေခဲ့သည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သော ချိုးငှက်လေးက
သက်ဝေ September 28, 2010 at 11:44 PM
စက်တင်ဘာ အမှတ်တရပိုစ့်လေးကို လာအားပေးသွားတဲ့ ယုံကြည်ချက်တူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဇွန်မိုးစက် September 29, 2010 at 10:30 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးငှက်ကို မွေးဖွားပေးတဲ့ စက်တင်ဘာလတဲ့လား မမရေ။
လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ ကျန်နေသေးတဲ့ ငှက်လေးတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
pandora September 30, 2010 at 12:13 AM
ဒါပေမယ့်လည်းစက်တင်ဘာတွေ ရင်ထဲမှာ အမြဲစီးဆင်းနေဦးမှာ
မိုးငွေ့...... September 30, 2010 at 1:14 PM
နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာမှာ ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်လိုက်ရလို့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်အရဆုံးဖြစ်သွားပြီ....